Sina mpanamboatra famokarana hidroôroina any China Dongfang
Famaritana Ho an'ny lafaoro fiovam-po famokarana hidrogen, ny hydrocarbons dia ampiasaina ho fitaovana madiodio, ary ny akora mivaingana ho an'ny fitrandrahana ny amonia sy ny hidrogen dia vokarina amin'ny fanavaozana ny etona. Ireo fatana hidrogen ireo dia manana toerany manokana ao amin'ny sehatry ny indostria toy ny synthesis ammonia, famolavolana solika, petrochemical, ary metallurgy. Ny lafaoro fiovam-po dia réaktera fiovam-po ary fitaovana fototra ho an'ny mpanafika hidrogen. Ity karazana fanehoan-kevitra ity dia nendrena ho fanafana ...
Ho an'ny lafaoro fiovam-po famokarana hidrogen, ny hydrocarbon dia ampiasaina ho fitaovana madiodio, ary ny akora mivaingana ho an'ny fitrandrahana ny amonia sy hydrogen dia vokarina amin'ny fanavaozana ny etona. Ireo fatana hidrogen ireo dia manana toerany manokana ao amin'ny sehatry ny indostria toy ny synthesis ammonia, famolavolana solika, petrochemical, ary metallurgy.
Ny lafaoro fiovam-po dia réaktera fiovam-po ary fitaovana fototra ho an'ny mpanafika hidrogen. Ity karazana fanehoan-kevitra ity dia natsangana ho ao amin'ny lafaoro fanorana izay nametrahana ilay kataly anaty fantsona fanavaozana tokana. Ity lafaoro hidrogen ity dia mafana be ary ny fihetsiky ny fihetsiketsika dia mihetsika amin'ny alàlan'ny fandriana catalyst ao anaty lafaoro. Ny fepetra hentitra amin'ny fampandehanana dia mahatonga ny lafaoro fiovam-po famokarana hidrozolika izay tsy mitovy amin'ny lafaoro hafa manana toetra toy ny firafitra fatana, ny fantsona fatana, ny fanohanana ny rafi-pitaterana, ny rafi-pitaterana fantsom-panafody, ny fandehanana gazy ary ny fitsinjarana, ny fitaovana famerenam-bidy, sns..
10,000Nm3h Solika Famokarana hidroôroina
20000Nm3h Famokarana fiovam-peo mikraoba
30,000Nm3h Famokon-tsolika mpanamboatra hidrôroina
60,000Nm3h Hidro fiovam-pamokarana mikraoba
Taloha: Lafaoro mikraoba
Manaraka: Tendrombohitra Coking
Railway , Heureur Transit , fampihenana Block , Machine Chill , fizarana fanafana , Ironisaly .